भाउ बढ्यो केकीको…. - Dainik Nepal
भाउ बढ्यो केकीको….
दैनिक नेपाल २०७१ वैशाख २३ गते १६:१७
प्रायस् सबैको रहरको केन्द्रविन्दु चलचित्र क्षेत्र जहाँ धेरैले आफनो सपनाका लागी मरिहत्य गरिरहेका हुन्छन् । एक त ठुलो पर्दामा देखिने भए पछि बरु पैसा नै नलिई चलचित्र खेल्ने कलाकार पनि छन् यहि सिने नगरीमा । चलचित्र क्षेत्रमा सम्भाबना बोकेर लाग्ने धेरै कलाकार छन् अनि धेरैको सोचाई छ( म पनि अरु जस्तै स्टार बन्न पाउँ भन्ने । तर कति सपनाहरु त्यसै हुरीले लग्छन् त कतिका सपनाहरु पूरा पनि भएका छन् ।
चलचित्र क्षेत्रमा आज नाम सुनेका धेरै कलाकारहरुले यहाँ सम्म आउनका लागी धेरै दुख गरेका छन् । तर अहिले चलचित्र क्षेत्रमा जम्नलाई केहि दुख गर्नुपर्दैन भन्ने मानसिकताले अहिले नेपाली सिनेमा क्षेत्र राम्रोसँग फस्टाउन सकेको छैन । एक त सिनेमा क्षेत्रको बजार निकै सानो छ त्यहिमा पनि एउटा चलचित्रसँग ४ बटा चलचित्र एकैसाथ सिनेमाहलमा लाग्दा चलचित्रले आफनो लगानी सम्म पनि उठाउन सक्दैनन् ।
यसरी नै चलचिरहेको नेपाली चलचित्रमा नवकलाकारहरु भित्रने क्रम निकै बढ्दै गएको छ । त्यही भिडमा चलचित्र क्षेत्रलाई निकै राम्रो चलचित्र दिइसकेकी नायिका हुन केकी अधिकारी । राम्रो अभिनय गर्न माहिर केकी अहिले चलचित्र क्षेत्रमा व्यस्त नायिकाको रुपमा पनि चिनिन्छिन् ।
नेपाली सिनेक्षेत्रलाई दर्जनौं चलचित्र दिएकी नायिका केकी एउटा चलचित्र खेले बापत ३ देखि ४ लाख सम्म लिने गरेकी बताइएको छ । पछिल्लो समय चलचित्र वितेको पलको राम्रो सफलता पछि केकीले आफनो रेट केहि बढाएको बताइएको छ ।
केकीले अहिले झण्डै नायकहरुकै हाराहारीमा पारिश्रमिक लिने गरेकी छिन् ।